Iindaba - Ukufakwa kwetywina loomatshini
Ukufakwa kwesitywina soomatshini
Ukufakwa kweMpawu zoMatshini
Indlela yokufaka itywina yoomatshini iyahluka ngohlobo lwetywina loomatshini kunye nohlobo lomatshini, kodwa ukufakwa okubalulekileyo kuphantse kwafana. Ukutywinwa koomatshini yenye yezinto ezisisiseko ezichanekileyo kunye nolwakhiwo oluntsonkothileyo. Amanyathelo okufaka kunye nezilumkiso zezi zilandelayo:
1. Indibano yeendawo ezihleliweyo zetywina loomatshini:
a. Faka ipini yokujikeleza ngokuchasene nomngxunya ohambelanayo wokuvala uphawu;
b. Beka isangqa setywina le-static kwindandatho emileyo, faka isangqa esisigxina kwisigqubuthelo sokugqibela, kwaye ubeke ingqalelo ekwenzeni ipini ejikelezayo yokungena ingene kumjelo wendandatho emileyo. Xa ufaka i-gland, qaphela ukuba ungenzi i-static ring ithinte i-shaft-iibholiti kufuneka ziqiniswe ngokulinganayo ngamaxesha amaninzi.
2. Indibano yamalungu ajikelezayo etywina lomatshini: hlanganisa iindawo ezijikelezayo zetywina loomatshini kwishafti nganye nganye ngokokulandelelana. Ukuba kukho umkhono weshafti, iinxalenye ezijikelezayo zetywina loomatshini kufuneka zihlanganiswe kumkhono weshafti ngokulandelelana, emva koko ishafti enezinto ezijikelezayo zetywina loomatshini kufuneka ifakwe kwishafti.
3. Faka ikhava yokuphela emzimbeni wokutywina kwaye uyiqinise ngokulinganayo ngezikrufu.
4.Nokuba uvavanyo lwediski lulula, ukuba idiski ayihambi okanye inzima, jonga ukuba ubungakanani bendibano buchanekile na. Indlela yokufaka:
(1) Jonga ukuba ngaba imodeli, imigaqo kunye neenxalenye zetywina loomatshini ukuba zifakwe zichanekile.
(2) Khangela ukuba onke amacandelo itywina ngoomatshini zonakele, ingakumbi ukuba uphawu uphawu ekupheleni ubuso ring kunye ring static zonakele. Ukuba kukho nawuphi na umonakalo ofunyenweyo, lungisa okanye ubeke endaweni entsha. Zonke izinto zokutywina ziya kucocwa ngepetroli okanye ngeparafini ukugcina umphezulu wamacandelo ungenalo uthuli kunye nemicimbi yangaphandle.
(3) Nokuba kukho ibrr kunye ne groove amanqaku kumphezulu weshafti okanye umkhono, udonga lwangaphakathi lokutywina umphezulu kunye nomphezulu wangaphakathi wokutywina. Ukuba kufunyenwe nayiphi na i-burr okanye i-groove, kufuneka igudiswe, ipolishwe, icocwe ngepetroli okanye iparafini, kwaye icocwe nge-gauze ecocekileyo kwaye ithambile, ikotoni efunxa kunye nezinye izinto. Ukwenzela ukuba kube lula ukuyifaka, ioyile kufuneka ifakwe kumphezulu weshafti okanye umkhono we-shaft kunye nomphezulu ofanayo wedlala kunye netywina lokutywina ukunqanda ukungqubana okomileyo ngelixesha lokuqala.